ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး တစ်နာရီလျှင် ၆၀၀ ကီလိုမီတာ အမြန်နှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်မည့်သံလိုက်ရထားမိတ်ဆက် - Xinhua News Agency
ချင်းသောင်၊ ဇူလိုင် ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက မြန်နှုန်းမြင့် သံလိုက်ရထားတစ်စင်းကို ယနေ့ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရထားသည် တစ်နာရီလျှင် ၆၀၀ ကီလိုမီတာ မြန်နှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ရာ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး ရထားအဖြစ် တည်ရှိနေသည်။
၎င်းရထားကို တရုတ်နိုင်ငံ ချင်းသောင်မြို့တွင် စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇွန်လက ရှန်ဟိုင်းတွင် စမ်းသပ်ပြေးဆွဲခဲ့သည်။သံလိုက်ရထားများသည် သံလမ်းပေါ်တွင် ဘီးပွတ်တိုက်မှုမရှိသောကြောင့် ပုံမှန်ထက်ပိုမို အသံငြိမ်သည်။
သံလိုက်ရထားအသစ်ဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်း ပြည်နယ် ၏ ကမ်းရိုးတန်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည့် ချင်းသောင်မြို့၌ အများပြည်သူသွားလာရန် ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်သည်။
ယခု ရထားအား တရုတ်ပြည်တွင်း၌ သာထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နယ်ပယ်တွင် နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဖြစ်လာကြောင်း China Railway Rolling Stock Corporation ကဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်၌ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများ တည်ဆောက်ရာတွင် ရှေ့တန်းမှ ဦးဆောင်နေသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အကုန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိမြန်နှုန်းမြင့်ရထားဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ရထားလမ်း စုစုပေါင်းအရှည်မှာ ၃၇,၉၀၀ ကီလိုမီတာရှိခဲ့ရာ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးရထားလမ်းကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားသည့်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ (Xinhua)
QINGDAO, July 20 (Xinhua) — China’s new high-speed maglev train rolled off the production line on Tuesday. It hasadesigned top speed of 600 km per hour — currently the fastest ground vehicle available globally.
It has been self-developed by China, marking the country’s latest scientific and technological achievement in the field of rail transit, according to the China Railway Rolling Stock Corporation. ■